Understanding Cash Flow Statement (CFS) and Analyzing its meanings
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ Operations တွေရဲ့ financial performance အခြေအနေကို လုပ်ငန်းရဲ့ financial statements တွေဖြစ်တဲ့ balance sheet, income statement နဲ့ cash flow statement တွေက အဓိကဖော်ပြပေးပါတယ်..
အထက်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ Financial Statements တွေထဲက ဝင်ငွေထွက်ငွေ ကို ဖော်ပြပေးတဲ့ Cash Flow Statement(CFS) အကြောင်းနဲ့ CFS ထဲမှာပါတဲ့ information တွေ ကိုအခြေခံပြီး လုပ်ငန်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြသနာတွေကို ဘယ်လို Identify လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကို အောက်မှာ တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
လုပ်ငန်းရဲ့ကျောရိုး Financial Health ဟာ CFS အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေလို့ လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်မှာ ဘယ်လောက်တည်တံ့ခိုင်မြဲလဲ… အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဘယ်လို ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပါ အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
CFS က ဖော်ပြပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ ငွေဝင်ငွေထွက် သို့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အခက်အခဲတွေက ဘာတွေလဲ?
အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင်တော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ရှိနေတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေ မျှတမှုမရှိတဲ့ ပြဿနာ…
တစ်နည်းအားဖြင့်… ထွက်ငွေက ဝင်ငွေထက်များနေတဲ့ အခါ လုပ်ငန်း ရေရှည်ဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့အတွက် အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်…
အခုလိုငွေကြပ်တည်းမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေများထဲမှ အဖြစ်အများဆုံး (9) ခုကိုရွေးချယ်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်…
၁။ ရာသီအလိုက် ရောင်းအားအတက်အကျ
လုပ်ငန်းအများစုမှာ သူတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ Product အလိုက် ရောင်းအားကောင်းတဲ့အချိန် ရောင်းအားကျတဲ့အချိန် ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
ဉပမာ- ကျောင်းသုံးပစ္စည်းနှင့် စာရေးကိရိယာ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တဲ့ ဇွန်လတွေမှာ ရောင်းအားသိသိသာတက်လာတာမျိုး… အဲဒီ အချိန်မှာ Marketing အတွက် သုံးရင် သုံးသလောက် သိသိသာသာProfit ပြန်ရနိုင်ချေများပေမယ့်…. ကျန်အချိန်များမှာ… မလိုအပ်ဘဲ Marketing Expenditure အတွက်သုံးမိရင်… income/expense imbalance ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်…
၂။ ရောင်းအားမတက်ခြင်း၊ abnormal (မူမမှန်) ရောင်းအားကျဆင်းခြင်း
လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်တည်ထောင်ချိန်မှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ဝင်ငွေထက် များနေတာ သဘာဝကျပေမယ့် အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ခုနကလို ပုံစံမျိုး ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့ ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အခက်အခဲရှိလာနိုင်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင်ရာသီအလိုက် ရောင်းအားကျဆင်းချိန်မဟုတ်ဘဲ… profit တွေကျနေမယ်… ရောင်းအားတက်ရမယ့်အချိန်မှာ သိသိသာသာ မတက်လာတာမျိုးကလည်း လုပ်ငန်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေပြီဆိုတာ သိသာအောင်ဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်…
၃။ လုပ်ငန်းနှင့် မကိုက်ညီသော payment structure အသုံးပြုမိခြင်း
တချို့သောလုပ်ငန်းတွေအတွက် မထင်မှတ်ဘဲ အကြီးဆုံးပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်…
ဥပမာ ကိုယ်ရဲ့ Suppliers တွေနဲ့ သဘောတူထားတဲ့ Payment Period က ကိုယ်ရဲ့ Direct Consumer နဲ့ လက်ကား Retail Client တွေဆီက ဝင်ငွေအဖြစ်ပြန်ဝင်လာမယ့် အချိန်ထက် ပိုနည်းနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးက လုပ်ငန်းအတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ Financial Stress တွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်…
ကုန်ပစ္စည်း များများဝယ်လို့ Discount(or) Factory Price နဲ့ ရပေမယ့် ဈေးကွက်မှာ Demand ထင်သလောက်မရှိတဲ့ အခါ ရောင်းထွက်ဖို့ကို အချိန်တစ်ခုပေးရသလို့
ကိုယ်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းက Expired Date ရှိတဲ့ Product မျိုးဆိုရင် အချိန်တန်လို့မှ မရောင်းရရင် Expired ဖြစ်တော့မယ့် Product ကြီးတွေပိုက်မိတဲ့ အခြေအနေမျိုး…
၅။သုံးစွဲမှုလွန်ကဲခြင်း (Expense Overdose)
အချို့သောလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ အမြတ်ကို တိုးတက်စေနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ… မလိုအပ်တဲ့ အပို့ပစ္စည်းတွေ အသေးစိတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေ ထပ်ဆောင်းပေးခြင်း (မိသားစုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများစုမှာ ပိုမိုကြုံတွေရလေ့ရှိပါတယ်)
သို့မဟုတ် ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် Same Quality and Service ကို တန်ကြေး(Market Value)ထက်ပိုပေးနေရတာမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုရင် ထွက်ငွေ(expense) ဟာ ရှိသင်တာထက်များနေပါလိမ့်မယ်။
၆။သင့်တော်တဲ့ Financing Structure မရှိခြင်း
လုပ်ငန်းကို ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(equity financing) နဲ့ စတင်လည်ပတ်မလား (သို့)… သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု ကချေးငွေ ရယူပြီး တည်ထောင်မလားဆိုတာဟာ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းရဲ့ အကြီးအမားဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါ…
လုပ်ငန်းက ပုံမှန်လည်ပတ်ပြီး အမြတ်တွေထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ Risk တွေကြောင့် ထင်ထားသလို ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေအနေမှာ Secondary Plan မရှိတဲ့ အခါမှာ လုပ်ငန်းအတွက် Financial Pressure တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်…
၇။ ရရန်ရှိ (Account Receivable) နောက်ကျမှရခြင်း
အရောင်းတွေတော့ တက်နေတယ် ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ကိုယ် Client တွေဆီက ဝင်ငွေတွေ မဝင်လာဘဲ စာရင်းသာရှိနေခြင်း… အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်ကျခြင်း
၈။ ကုန်ကြွေးငွေမရခြင်း (bad debts)
မယုံကြည်ရတဲ့ Client ကို ရောင်းအားမကောင်းတဲ့ Retail Customer တွေ ကို Consignment/ Credit စနစ်ဖြင့် ကုန်ကြွေး အများကြီးချ ပေးမိတဲ့အခါမျိုး… အချိန်ကြာလာတဲ့ အလျောက် အရင်းတောင် ပြန်မရဘဲ Bad Debt နဲ့ အဆုံးသတ်သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်…
၉။ ကုန်ကြမ်းတန်ဖိုးကြီးပြီးအမြတ်ငွေနည်းခြင်း နှင့် Fixed Cost ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း
Raw Material နဲ့ Production Expense များပြီ Profit Margin နည်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု များ သာရှိခြင်း
ပုံသေကုန်ကျစရိတ်(Fixed Cost) ဉပမာ - ဆိုင်းခန်းငှားခ၊ မြေငှားခ, ကို Cover ဖြစ်အောင် ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း…
စတာတွေကတော့ လုပ်ငန်းအတွက် ငွေကြပ်တည်းမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အခြေအနေများတွေဖြစ်ပါတယ်…
နောက်တစ်ပတ်မှာ လည်း အထက်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ Cash Flow ဆိုင်ရာပြသနာတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Action တွေကဘာဖြစ်မလဲ… လုပ်ငန်းရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်အောင် ဘယ်လို Action Plan တွေနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရမလဲဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ Matrix Solutions Business Advisory Group pageလေးကို Like & Follow လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်…